Olee otú iji tọghata AVCHD ka YouTube Ò Kwekọrọ n'Ozizi Formats t
N'ụwa taa, ọzọ na ndị ọzọ Ngwa na-apụta na-ahịa, a na-agụnye iche iche ụdị camcorders, na n'ihi na nke a mere anyị ga-ibu ihe mere ka Panèl anyị pụrụ iche n'oge na iji ndị a elu eji ngwaọrụ. Na ọ dịghị akwụsị n'ebe ahụ! Anyị na-amasị ịkọrọ ya ka ụwa site na-ebugote ha dị iche iche video nkekọrịta weebụsaịtị ka YouTube. YouTube bụ ndị kasị ewu ewu video nkekọrịta website nke taa, na ebe a na i nwere ike ịhụ fọrọ nke nta ụdị ọ bụla nke videos ị pụrụ iji anya n'ihi na.
Ma nsogbu bụ na, e nwere mgbe camcorders na YouTube adịghị ikukota. Nke a bụ n'ihi na ọtụtụ HD camcorders taa na-emepụta AVCHD formatted faịlụ na YouTube adịghị akwado nke a usoro. I kwesịrị ịma na YouTube nwere ike na-akwado ndị na-esonụ formats: MOV, MPEG4, MP4, AVI, WMV, MPEGPS, Flv, 3GPP, na WebM. Ma nke N'ezie, e nwere mgbe a mfe ngwọta n'ihi na nke a dị mfe nsogbu.
Part 1: Best AVCHD ka YouTube Ntụgharị
Part 2: Free AVCHD ka YouTube Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online AVCHD ka YouTube Ntụgharị
Wondershare Video Converter Ultimate Dị njikere inyere gị aka na nke a ụdị ọnọdụ iji tọghata gị AVCHD faịlụ n'ime a YouTube dakọtara usoro.
Nzọụkwụ 1 mbubata AVCHD File
E nwere ihe abụọ ụzọ dị mfe mbubata gị AVCHD faịlụ n'ime Wondershare Video Converter Ultimate, mbụ bụ site na ịpị + Tinye Files bọtịnụ ịchọta dị na center nke usoro ihe omume panel, a nchekwa faịlụ ga-gbapụta si na n'ebe i nwere ike ịhụ na ọnọdụ nke na AVCHD faịlụ na ị chọrọ iji tọghata. Na-esote usoro i nwere ike iji mbubata AVCHD faịlụ bụ nanị ịdọrọ faịlụ site na ọnọdụ ebe ọ na-echekwa na dobe ya na panel nke software usoro.
Nzọụkwụ 2 Họrọ YouTube Ò Kwekọrọ n'Ozizi Formats Dị ka mmepụta Format
Site AVCHD, ọ bụghị oge atụgharị gị faịlụ n'ime a ihe na-aga na-arụ ọrụ na na na na na YouTube media n'elu ikpo okwu. Iji mee nke a, họrọ otu si ndepụta n'okpuru mmepụta Format. Otu n'ime ndị kasị usable formats bụ MOV mere na atụ anyị ga-eji MOV dị ka mmepụta usoro.
Nzọụkwụ 3 Malite akakabarede
Dị nnọọ see tọghatara button iji amalite akakabarede ma ọ bụrụ na ị dị njikere iji tọghata gị AVCHD faịlụ n'ime YouTube akwado format faịlụ. Ezie na video na-converting, ị nwere ike ị kwụsịtụ ma ọ bụ kagbuo akakabarede.
Na ọ mere! Ugbu a, i nwere ike igwu gị dere video na gị Windows kọmputa na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Ka onwe gị iji tọghata gị AVCHD media faịlụ na bulite ya na YouTube iji Wondershare free video Ntụgharị. Ọ na-enye gị niile akakabarede dị mkpa na pụrụ inyere gị aka nwere faịlụ na bụ dakọtara na kọmputa gị na-mobile ngwaọrụ.
-Eme converting ọrụ zuru okè
Free version naanị akwado converting ejikarị video formats.
Ị na-adịghị enwe ike ịtọ gị mmepụta faịlụ Ọkpụkpọ na 3D, HD, na kpọmkwem n'ihi na ụfọdụ ngwaọrụ.
Akakabarede ọsọ bụ ngwa ngwa, ma ọ bụghị dị ka zuru version.
Ị na-adịghị ekwe ka ọkụ CD ma ọ bụ DVD na free version.
Gbalịa a online Ntụgharị ọ bụrụ na ị emekpala iji wụnye ihe ọ bụla na kọmputa gị.
Olee otú Mee Ringtones si YouTube
> Resource> YouTube> Olee otú iji tọghata AVCHD ka YouTube Ò Kwekọrọ n'Ozizi Formats